2 - 4 Gunyana 2020Shanghai, China! Tikugashirei kuCinte Techocolil China!
na admin pa 20-08-17
Inte Cinte Techtextil China ndiyo inotungamira kutengeserana kurudziro yezvigadzirwa zvemachira uye zvisiriwoveno zvigadzirwa muAsia uye chinzvimbo chechipiri chete kuneIye chinoratidzwa cheTechnologyil kuGermany yepasi rose.Iyo Fair yakazvirumbidza inzvimbo yekuratidzira ye ...
Sei tichishandisa isu kunzwa kudzidza calligraphy?
na admin on 20-08-08
Sei tichishandisa isu kunzwa kudzidza calligraphy? Handizive kana uchiri kuyeuka kuti kana iwe uchinyora calligraphy muchikoro chepuraimari, zvikoro zvichashongedza munhu mumwe chete neizwi diki. Sei uchishandisa kunzwa kudzidzira calligraphy? Nhasi, vanonzwa vanogadzira kuti vauye kuzokuudza ...
Iwo madhiri emunwe akagadzirwa nemucheka usiri-wakarukwa anopenga kune vana!
Mhoroi, munhu wese! Ivo vewe iwe une Mwana kumba, iwe une tsika yekuudza nyaya kuvana vako manheru? Kana kutamba mitambo nevana vako munguva yako yemahara? Vana mumhuri medu vanofarira kwazvo nyaya yenguva dzese manheru. Kunyangwe zvodii ...
Chemical fiber yakanzwa isu kuti titeerere kune izvo zvakakosha
na admin on 20-07-01
Kune nzvimbo dzakawanda mukushandiswa kwemakemikari fiber yakanzwika, yakanzwika zvakanaka, munzvimbo dzakawanda dzinobatanidzwa. Asi mukushandisa kwechigadzirwa ichi isu tinofanirwa kutarisisa kune zvimwe zvinhu, kuitira kuti zvirinyatsoishandisa. Felt iri muhupenyu hwedu is ins ...